Dabinnada lagu ogaanayo haddii lammaanahaagu uu kugula kacayo daacadnimo | Niman qurux badan
Qolka Ignatius | | dhaqanka, nololeedka
Marka guurka ama lamaanaha ay shaqeyn waayaan, waxa ugu fiican gooyaaniyadoon loo eegin da'daadu. Ma jirto wax faa'iido ah oo dheereeya xanuunka aan cidna wax u tarayn. Daacad la'aanta guurka waxay la xiriirtaa luminta kalsoonida deegaankaaga, lumitaanka, mararka qaarkood, suurtagal maaha in laga soo kabsado.
sidaas darteed haddii aad tahay qof aan daacad ahayn sida haddii aad u maleyneyso in lammaanahaagu uu yahay mid aan daacad ahaynMarka xigta, waxaan ku tusineynaa dabinno taxane ah oo aad ku ogaan karto ama aad ogaan karto haddii lammaanahaagu uu tallaabo hore u qaaday isagoo aan horay u jarin xiriirka.
Waxa ugu horreeya ee maskaxda lagu hayo waa taas Beentu waxay leedahay lugo aad u gaaban. Horaa loo maahmaahdaa, beenaale waa la soo qabtaa, waaba nin curyaan ah. Taas waxaan ula jeedaa abuurista beentu waxay ka dhigan tahay in la awoodo in la ilaaliyo waqti ka dib oo la ogaado mar walba waxa aan sheegnay in la ilaaliyo mar kasta, mar haddii khilaaf kasta uu dhalin karo tuhunka ugu horreeya.
1 Waxaad bedeshay furaha furaha taleefankaaga casriga ah
2 Isaga/iyadu way naxayaan marka aad soo qaadato mobilkiisa
3 La hadal asxaabta
4 Ma doonayo inuu kula joogo
5 Wuxuu bedelay nidaamkii caadiga ahaa
6 Iska dhig inaad wax walba taqaan
7 Raadi shukaansi apps
8 Wuu kaa socdaa si uu uga jawaabo taleefoonada ama fariimaha
Waxaad bedeshay furaha furaha taleefankaaga casriga ah
Haddii aad wada joogteen dhowr sano waxay u badan tahay in labadiinaba waad garanaysaan furaha telefoonnadaada. Sababta aqoontani maaha in aad gudaha ka dhex baadho, balse waa in aad ka faa’iidaysato waqtiyada aynaan kari karin sabab kasta ha ahaatee, ama cunto karinaysa, gacmo wasakh ah ayaanu haynaa, waxaanu doonaynaa in aad Mobile-kayaga ku sawirto, u jawaab saaxiib, si aad u aragto iimaylka...
Xidhiidhku waxa uu ku salaysan yahay is-aaminaad labada dhinac ah. Haddii tani ay bilaabato inay baaba'do, waxa ugu horreeya ee kuwa ku lug leh beddel furaha gelitaanka ku xidho qalabkaaga mobaylka si aad uga hortagto inuu gudaha soo galo.
Hadii uu yahay lamaanahaaga kan bedelay furaha talefanka gacanta, waa calaamad aan shaki lahayn in wax ma shaqeeyaan, kalsoonidaas oo luntay oo uu ku qarinayo wax uusan rabin inaad aragto.
Isaga/iyadu way naxayaan marka aad soo qaadato mobilkiisa
Haddii uu neerfsado ama nasasho la'aan marka aad qabato taleefankiisa, xitaa kaliya inuu ku dhaqaaq adiga oo aan damacsanayn in aad gasho, waxaad noo ogolaan kartaa inaan fahamno inaad ka baqeyso inaad awood u yeelan doonto inaad gasho macluumaadkaaga, illaa iyo inta aadan sameynin tallaabadii hore adigoo bedelaya koodka furitaanka.
La hadal asxaabta
Guud ahaan Qofna keligii uma baxo inuu wax cabbo oo aad uga yar haddii aad ku jirto lamaane. Haddii ay bilowday shukaansiga cudur daarka la kulanka asxaabteeda, waa inaad la hadashaa mid iyaga ka mid ah si aad u xaqiijiso sheekadeeda.
Haddii, marka lagu daro, in saaxiibkaa uu leeyahay lammaane, waa inaad sidoo kale la hadashaa iyada Xaqiiji sheekada. Sida iska cad, u sheeg inuusan waxba u sheegin lammaanihiisa.
Haddii aakhirka ay dhacdo, waxay u badan tahay in waxaad arkaysaa isbeddel ku yimi hab-dhaqanka lammaanahaaga, isbeddel ku iman kara sababo kala duwan oo aan ahayn oo kaliya inuu run ahaantii daacad u yahay, laakiin sababtoo ah wuxuu ogaaday inuu kaa tagayo.
Ma doonayo inuu kula joogo
Sababta kale ee ay tahay in aan xisaabta ku darno marka aan bilaabayno inaan ka fikirno haddii lammaaneheennu aanu daacad ahayn sariirta ku casuun. Haddii uu diido cudur daar aan macno lahayn, waa inaan bilownaa inaan ka fikirno inay wax khaldan yihiin iyo in lammaaneheennu ay u badan tahay inuu raaxo ka raadsaday meel kale.
Wuxuu bedelay nidaamkii caadiga ahaa
Haddii aad hubiso sida uu isu beddelay hawl maalmeedkii lammaanahaaga ee ka baxsan shaqada oo uu si dirqi ah guriga u joogsado adiga oo aan ku waydiin ama u samayn si goos goos ah, waa in aad hubisaa in ay dhab ahaantii aado halka ay ku qoran tahay.
Habka ugu fudud waa in la raaco oo la hubiyo. Habka kale waa la soco telefoonkaaga gacanta, inkasta oo sidaas la sameeyo waxaa lagama maarmaan ah in la haysto magaca isticmaalaha iyo lambarka sirta ah ee aaladda (telefoonnada gacanta laguma ogaan karo iyada oo la adeegsanayo saddex-geesoodka mastarada taleefanka gacanta sida aan ku aragno filimada iyada oo aan la helin amar maxkamadeed).
Iska dhig inaad wax walba taqaan
Habka aan waligiis fashilmin marka ay timaado in la ogaado gaalnimada waa u dhaqan sida aan ognahay waxa jira. Haddi aan bedelno hab-nololeedka lammaaneheenna hal habeen, hadday wax ay qariyaan, waxay na weydiinayaan maxaa naga qaldan.
Haddii kale, waxay u badan tahay, iyada oo la sii marayo maalmo, ama toddobaadyo, tani si buuxda u quusan, ee cududdiisa si uu u maroojiyo oo uu noo qirto in uu qof kale daacad ka yahay. Waxa kale oo ay u badan tahay, in habeen, uu gurigayaga ka waayi doono alaabtiisa oo dhan, isaga oo aan wax sharraxaad ah naga siin.
Raadi shukaansi apps
Haddii xiriirku aanu shaqayn muddo dheer, laakiin Waxaad ku wada noolaan doontaan si caadi ah Iyadoo aan la ilaalin wax xiriir ah oo dhaafsiisan subax wanaagsan ama habeen wanaagsan, waxay u badan tahay in qayb ka mid ah lammaanaha ay raadiyeen inay la kulmaan dad cusub codsiyo ay ka mid yihiin Tinder, Badoo, Meetic ...
Samaynta raadinta codsiga noocan ah, iyada oo loo marayo filtarrada kala duwan ee ay ku jirto, waxay noo oggolaan doontaa inaan si dhakhso ah u helno raadi haddii lammaaneheennu suuqa ku jiro raadinaya lamaane cusub ama kaliya ka eegaya dibadda lamaanaha waxa uusan ka helin.
Si aad awood ugu yeelato inaad wax baadho, waa inaad samaysaa Bixiso bil walbaHaddii kale, tirada fursadaha raadinta la heli karo waxaa lagu dhimi doonaa ku dhawaad ​​eber.
Wuu kaa socdaa si uu uga jawaabo taleefoonada ama fariimaha
Haddii aad la joogto lamaanahaaga iyo si lama filaan ah, marka uu helo wicitaan ama fariin kac oo u socda si uu u jawaaboIsaga oo aad mooddo in uu ka baqayo in aad aragto shaashada gacanta ama aad maqasho waxa uu qofka kale ku hadlayo, waa in aad bilawdaa in aad is waydiiso in uu jiro wax aan shaqaynayn xidhiidhkaaga.
Markaad nagu soo noqoto ka dib markaad ka jawaabto wicitaanka ama fariinta, waa inaan weydii qofka uu ahaa. Haddii uu noogu jawaabo si aan macno lahayn oo nooc ah, cidna may ahayn, way khaldanaayeen, qaraabo buu ahaa, waa in aan uga jawaabnaa inuu rabay inuu shakiga ka saaro oo uu eego inuu sheekadiisa xaqiijin karo.
Haddii ay waqti qaadato, waa in laga jawaabaaSababtoo ah ma haysto cudurdaar diyaar u ah inuu ku siiyo oo wax bilaabaan inay ur xun xiriirka. Haddii tan iyo markii aad la kulantay isaga uu had iyo jeer sameeyo wax la mid ah, marka hore maaha inay dhibaato noqoto, maadaama ay tahay caado ay dadka qaar leeyihiin.
Wadada buuxda ee maqaalka: Ragga Stylish » nololeedka » Dabinnada lagu ogaanayo haddii lammaanahaagu uu kugula kacayo daacadnimo